Dhibaatada keenista Kharaabada iyo Sweden | Somaliska
Dhibaatada ka haysata bulshada Soomaaliyeed ee Iswiidhan in ay reerkooda keensadaan ayaa sii kordhaysa ayadoo saxaafada wadankana ay isha ku hayaan. Maanta ayuu soo bandhigay televishinka sweden (SVT) akhbaar ka hadleysa arintaas. Hay'ada Socdaalka Sweden oo horay waxkasta uga hormarin jirtay isku keenida reeraha ayaa hada inta badan dadka siisa diidmo, ka dib markii Maxkamada Socdaalka Iswiidhan ay waajib uga dhigtay in qofkasta uu soo bandhigo aqoonsi, taas oo la ogyahay in Soomaalidu aysan awoodin. Aabaha lagu macaabo Bashir oo reerkiisa ay ku sugan yihiin dalka Ethiopia ayaa u dagaalamaya siduu ugu heli lahaa degenaansho, balse Hay;da Socdaalka ayaa diidmo siisay aqoonsi la'aan xaga caruurta darteed, walow xitaa uu ogolaaday in laga qaado DNA. Sidoo kale Xasan Xogsade ayaa ku dooday in ay bidaari ku gashay inta uu u raadinayay degenaanshaha Xaaskiisa.
Dhibaatada ka haysata bulshada Soomaaliyeed ee Iswiidhan in ay reerkooda keensadaan ayaa sii kordhaysa ayadoo saxaafada wadankana ay isha ku hayaan.
Maanta ayuu soo bandhigay televishinka sweden (SVT) akhbaar ka hadleysa arintaas.
Hay’ada Socdaalka Sweden oo horay waxkasta uga hormarin jirtay isku keenida reeraha ayaa hada inta badan dadka siisa diidmo, ka dib markii Maxkamada Socdaalka Iswiidhan ay waajib uga dhigtay in qofkasta uu soo bandhigo aqoonsi, taas oo la ogyahay in Soomaalidu aysan awoodin.
Aabaha lagu macaabo Bashir oo reerkiisa ay ku sugan yihiin dalka Ethiopia ayaa u dagaalamaya siduu ugu heli lahaa degenaansho, balse Hay;da Socdaalka ayaa diidmo siisay aqoonsi la’aan xaga caruurta darteed, walow xitaa uu ogolaaday in laga qaado DNA.
Sidoo kale Xasan Xogsade ayaa ku dooday in ay bidaari ku gashay inta uu u raadinayay degenaanshaha Xaaskiisa.